Blockchain သတင်းများဇန်နဝါရီ72018 - Blockchain သတင်းများ
Mark Zuckerberg ဟာ Facebook ကို decentralize ကူညီရန် Bitcoin အပေါ်မှီခို
Bitcoin powering နည်းပညာအနာဂတ်မှာ Facebook ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီနိုငျ, Mark Zuckerberg ဟာပြောပါတယ်.
ကျော်ဆိုက် fix ကိုကူညီမယ့်ကတိက၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် 2018, တည်ထောင်သူသူကအတော်လေးဒါဗဟိုဖြစ်ခြင်းရပ်တန့်ဖို့နည်းပညာအသစ်များအသုံးပြုခြင်းသို့ကြည့်ရှုလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်.
သူတို့အားနည်းပညာများတစ်ခုမှာ Bitcoin ဖြစ်ပါသည်, ဟုသူကပြောသည်.
“ကျနော်တို့ကလူရဲ့လက်၌ပိုပြီးပါဝါကိုထည့်လေ့မရှိတဲ့ဗဟိုလျော့ချအင်အားသုံးနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်တွေအများကြီးနည်းပညာသို့ရတယ်. (Facebook ရဲ့မစ်ရှင်၏ပထမဦးဆုံးလေးခုစကားလုံးများကိုအမြဲဖြစ်ရပြီ “လူများတို့သည်တန်ခိုးတော်အားပေး”.) နောက်ကျော 1990 နှင့် 2000 ပြည့်နှစ်များတွင်, လူအများစုနည်းပညာတစ်ဗဟိုလျော့ချအင်အားသုံးလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်,” သူကတာရှည်ပို့စ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်.
“သို့သော်ယနေ့…များစွာသောလူယခုနည်းပညာကိုသာပါဝါ centralizes ထက်က decentralizes ယုံကြည်ပါတယ်။”
“ဤအရေးကြီးသောတန်ပြန်ခေတ်ရေစီးကြောင်းရှိပါတယ် - စာဝှက်စနစ်နှင့် cryptocurrency နဲ့တူ - ဗဟိုစနစ်များအနေဖြင့်အာဏာကို ယူ. လူရဲ့လက်သို့ပြန်ထားကြောင်း. ဒါပေမဲ့သူတို့ကထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲဖြစ်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုအတူပါလာ. ကျွန်မပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားပါနှင့်ဤနည်းပညာများ၏အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောရှုထောင့်ကိုလေ့လာဖို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ပေါ့, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှုအတွက်သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး,” သူကရေးသားခဲ့သည်.
အင်္ဂလန်ဘဏ် cryptocurrency ဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်း
အင်္ဂလန်၏ဘဏ်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်အပေါ်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြားတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်ကိုကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်.
အဆိုပါ U.K. ရဲ့ဗဟိုဘဏ်တစ်ခုကိုရှိကြောင်း FTAdviser ပြောသည် “အဘယ်သူမျှမကလက်ရှိအစီအစဉ်များ” ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် cryptocurrency စတင်ရန်, ဒါပေမယ့်ခေါင်းစဉ်သုတေသနကိုဆက်လက်ဦးမည်.
အဆိုပါဘိုးကအများပြည်သူစီးပွားဖြစ်ဘဏ်စာရင်းသုံးပြီးရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အရောင်းအဘို့ဘိုးရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုစနစ်အပေါ်ကိုရွှေ့စေခြင်းငှါ, စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူကျော်အစီအစဉ်များကိုကျဆင်းသွားညွှန်ပြ. အဆိုပါဘိုး cryptocurrency မှတစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြောင်းရွှေ့ချေးငှားဖို့ငွေသားထဲကအပြေးစီးပွားဖြစ်ဘဏ်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ,, ဖြစ်စေတဲ့ “လှုပ်ရှားထကြွခြင်း” စီးပွားရေးအတွက်, ကဆိုပါတယ်.
သြဇာ Bitcoin ETF သည့် SEC ဖို့အဆိုပြု
U.S. ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာများ "သြဇာ" ကိုတည်ဆောက်ရန်စီစဉ်နေကြောင်းနှင့်မြင့်တက်မယ်လို့ "ပြောင်းပြန်" ရန်ပုံငွေများနေကြတယ် – သို့မဟုတ်ပြိုလဲ – ပေးထားသောနေ့၌ Bitcoin ၏စျေးနှုန်းအဖြစ်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်အစာရှောင်ခြင်း.
Direxion Asset Management တွင် LLC U.S လျှင် Intercontinental ချိန်း Inc မှဖွင့် NYSE Arca လဲလှယ်အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်စာရင်းပြုစုရန်စီစဉ်. အာမခံဥပဒေစည်းကမ်းညိတ်ပေး, ယခုအပတ်ဖလှယ်ခြင်းဖြင့်ဖိုင်တစ်ခုအရသိရသည်.
ဒီတော့ဝေး U.S. Securities and Exchange Commission အပေါငျးတို့သအဆိုပြုချက်ငြင်းဆန်သို့မဟုတ်ကိုင်ပေါ်တွင်တင်ထားသည်.
လှော blockchain စီမံကိန်းများကိုရန်ပုံငွေဂျော့ခ်ျဆိုးရော့ကနေအမေရိကန် $ သန်း 100 လက်ခံရရှိပြီးပို
Overstock.com ရုံဘဏ္ဍာရေးအတွက်အကြီးမားဆုံးအမည်များကိုတဦးအနေဖြင့်ပြောင်းလဲမှုကိုတစ်ကြီးမားကျယ်ပြအတုံးတယ်, နှင့် CEO ဖြစ်သူပက်ထရစ် Byrne ကအများကြီးကုမ္ပဏီ၏ blockchain အလုပ်ရန်ပုံငွေလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်.
အဆိုပါကုမ္ပဏီတစ်ခု Securities and Exchange Commission အတွက်ထုတ်ဖော် (SEC) တစ်ရမ်း၏ကိုင်ဆောင်ထားသူဝယ်ဖို့က၎င်း၏ညာဘက်ကျင့်သုံးခဲ့သောကြောင့်ယခုသီတင်းပတ်ဖြည့်စွက် $100 ရှယ်ယာသန်းတန်ဖိုးရှိ. ဖိုင်တွေကိုဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွဲခြားသတ်မှတ်မပြုခဲ့ပေမယ့်, Byrne က Quantum ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ခဲ့ CoinDesk ပြောသည်, ဘီလျံနာဂျော့ဆိုးရော့ကစီမံခန့်ခွဲ.
Blockchain သတင်းများဇန်နဝါရီ 7, 2018
SEC decisi ဖို့တိုက်တွန်းနေ ...
Previous Post:၏အရေးအပါဆုံးဖြစ်ရပ်များ 2017 အဆိုပါ Crypto အဝန်းထဲမှာ
Next Post:ဘယ်လို ICO Market ကပြောင်းလဲကြလိမ့်မည် 2018?